Vaovao - Inona avy ireo antony misy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny tahiry FBA an'i Amazon
Inona avy ireo antony misy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny tahiry FBA an'i Amazon
Ho an'ny magazay an-tserasera Amazon, ny isan'ireo andro fanisana dia manondro ny isan'ny andro ananan'ny lozisialy Amazon ny varotra rehetra. Ny turnaround dia ny isan'ny fotoana mihodina isan-taona ny lisitra lozisialy Amazon anao, raha jerena ny haavon'ny tahiry ankehitriny sy ny tahan'ny varotra. Ka inona avy ireo antony misy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny tahiry?
Misy antony lehibe maromaro mahatratrarana ny tanjon'ny zava-bitan'ny lisitra:
1. Andro fitahirizana
2.SKU ho tahiry
4. SKU tsy misy lisitra fampahalalana amidy
Amin'ity dingana ity dia misy karazana tolo-kevitra maromaro hanampiana amin'ny fanatsarana ny IPI (Tanjona Fampisehoana Inventory):
1.Mampihena ny tombom-barotra bebe kokoa ny fampihenana ny tahiry be loatra
2. Ampitomboy ny tahan'ny fivarotana mba hampifandanjana ny isan'ny herinandro amidy
3. Amboary ny tahiry Amazon raha tsy misy fampahalalana momba ny varotra hahazoana antoka fa misy ny tahiry azo vidiana.
4.Ny fitazonana entana malaza amin'ny stock dia manampy amin'ny fampitomboana ny varotra
Andro tahiry Amazon
Mety tsara ny mitazona ny andro fanisana FBA manodidina ny 30-60 andro. Ny iray dia ny fisorohana ny tsy fahampian'ny stock ary ny iray hafa dia ny fampihenana ny overhang inventory.
Ny lisitra dia amin'ny dingana samihafa ary tokony hisy fiheverana samihafa.
Fotoana fampandrosoana: raha ny rohy dia ao anatin'ny vanim-potoana fampandrosoana, ny varotra isan'andro dia mitombo haingana, ary ny andro fanisana dia hanana dingan'ny fihenam-bidy haingana sy mavitrika ihany koa. Raha voatazona hatrany ny tahiry noho ny haben'ny varotra tany am-boalohany, mety ho 60 andro ny famatsiana, ary ny rohy dia tsy ho lany tahiry haingana noho ny fitomboan'ny haben'ny varotra, izay manome fotoana ny fanomanana ny lisitra manaraka.
Vanim-potoana maharitra: Milamina ny varotra isan'andro, mitazona nomeraon-tahiry 30 andro hahazoana antoka fa afaka miatrika olana maika. Ohatra, ny mpividy orinasa dia mividy fividianana lehibe, ny rohy dia zarain'ny olo-malaza amin'ny tranonkala, sns. Ireo fisehoan-javatra tampoka ireo dia matetika tsy ampoizina ary tsy mahazatra. Ny ankamaroan'ireny fisehoan-javatra tampoka ireny dia ny fisondrotan'ny varotra indray andro ary avy eo fanamafisana avy eo. 30 andro na mihoatra ny fanisana, ankoatry ny fiatrehana ireo vonjy taitra ireo mba hahazoana antoka fa misy ny fotoana fanarahana ny lisitra maika.
Dingana fitotonganana: Rehefa mihena tsikelikely ny lisitra noho ny fiovan'ny vanim-potoana, ny fijerena ratsy, ny fahaverezan'ny tombony amin'ny fifaninanana ary ny antony hafa, dia mihena ny habetsaky ny varotra isan'andro ary ny isan'ny andro fitatanam-bola FBA dia mitombo haingana.
Amin'izao fotoana izao dia ilaina ny mamakafaka ny antony faran'izay haingana, manitsy ny paikady fitahirizana tahiry, mifehy ny isan'ny andro fitahirizana amin'ny alàlan'ny fampihenana ny tahiry na fampiroboroboana antonony, ary hampihenana ny mety ho fihoaran'ny stock stock.